Taariikhda My Butros » 5 Noocyada First Daters. Taas oo ka mid Tahay?
by Samantha xidhnaa
5 Noocyada First Daters. Taas oo ka mid Tahay?
Waxaa jira sayniska ah in shukaansi. Nolosha shukaansi waxaa loo ekaysiin karaa si tijaabo chemistry meesha aad rajaynaynaa in adiga iyo taariikhda ku dhamaystiri mid kale oo keeni in jiidashada wanaagsan oo a.
Taariikhda A guul ku xiran tahay waafaqsan ee daters ah. Laakiin isagoo garanaya nooca dater aad tahay kaa caawin kara inaad ka badan sifooyinka aad positive soo baxay aan wax u dhimin oo aad xaqiiqdii tahay.
Sidaas, nooca dater aad dhihi lahaa aad tahay?
The In ka badan-barad ah
Haddii aad tahay hadal badan-, aad tahay in ka badan ayay u badan tahay qalafsan ah. Mararka qaarkood Hadyadiina ee GAB badan uga dareemayaal oo ka yar in la sameeyo iyadoo baahi loo qabo in la hadasho. Waxaad mararka qaarkood jaray dadka marka tiimbanaynay, ma on Ujeedada dabcan, oo aad wax dhib ah uma hesho ereyada saxda ah marka uu qof kuu weydiineysaa inaad u sheegto adiga kugu saabsan. Waxaad haysan doontaa in ay bartaan sida wax loo dhegaysto kaliya sidoo kale waxaad la hadli. Waxaad doonaysaa in la hubiyo in adiga iyo taariikhda helayso in ay is aqoonsan. Arintanina waxay kaa caawin doontaa inaad go'aan ka gaadho haddii laba aad ku wanaagsan yihiin jagada ama leheyn.
Ms. & Mr. Waxaan
Qof Helitaanka oo uu noqon karaa mid si siman lover ah oo saaxiib muhiim ah in tani dater koowaad. Markan Waxaad samayn aad u cad maalinta ugu horeysa ee. Ka hor inta aadan baxday in la ogaado taariikhda, aad si deg deg ah u sameysaa qorshe taariikhda labaad iyo xitaa wada getaways. Waxaa laga yaabaa inaad la bilaabo weedhaha aad ula aad u tiro badan "waxaan karto" oo aan ku filan "Waxaan leeyahay." Tani waxay ku siin kartaa taariikhda aragti ah in aad tahay dhegganaan ama xukumaan xitaa haddii aadan yihiin iyo waxa ay ku yeelan karaan iyaga oo qorsheyneysa in ay bixitaan ka hor Petersen, ku siin karaan macmacaan. Ma jiraan wax qalad ah waa la muujiyaan dareenkooda ku dhaqaaqo taariikhda ugu horeeyay ee heerka ku xiga, kaliya u hubiso in aad go'aan ka gaadho haddii aad taariikhda doonayo la mid ah sida aad u.
Waxaad tahay xaqiiqo ah oo madax bannaan oo aadan u baahnayn qof ama wax si loo ansixiyo qofka aad tahay. Freedom waa mudnaanta kuu ah iyo wax kasta oo hanjabaad ka soo hor jeedda helo cutout ee noloshaada. Maskaxda ku hay: marka aad ka soo saaray tamarta ee u ma baahna qof ama in ay aad uga untamable, waxay noqon kartaa a jeedin-off aad taariikhda. Qof kasta oo doonaya inuu ka dareemaan loo baahan yahay in awoodda qaar ka mid ah. Haddii aad rabto in aad taariikhda oo aadan rabin in la siiyo taariikhda aragti ah in aad rabto in aad doonaa wakhti kasta oo dheeraad ah ugu dhaqsaha badan, ayaa sheegaya in. Taariikhda koowaad waa waqtiga ugu wanaagsan in waxkasta baxay miiska saaran.
Haddii aad tahay noocan ah dater, aad imminkaba taqaanid nooca qofka aad hoos si sharraxaadda ee ay doonayaan. Waxaad xitaa naftooda aad abaabulay on jadwal horay loo qorsheeyey dhacdooyinka nolosha oo si wayn sida guurka iyo kids. Ka hor inta aadan ka fikirto keeneen aad ugu fiican qorshayaasha arooska on taariikhda ugu horeeyay, tijaabiso biyaha ku leh taariikhda iyo arko haddii aad gool iyo rabitaanka dhigma ilaa. Waxay noqon kartaa cabsi ah in qof uu maqlo ku saabsan wax la xiriira go'an tahay marka ay kaliya rabto in qof kale si uu shineemada u leh.
Reader Resume The
Inta badan sida deriskaaga nin xaqiiqada ku xusan, aad u ogaato waxa aad rabto laakiin aad tahay xoogaa sii saaraynaa sida taariikhda ka dhiga lacagtooda. Waxaad fikrad adag sida ay u dul saarto waa in ay kor u leeyihiin marka ay timaado saamaynta iyo dhaqaalaha. Yaa ay u shaqeeyaan ama loo isticmaalo in ay u shaqeyso waa waxa dadoow aragtida ah cidda ay yihiin. Ogaanshaha nooca qofka aad doonayso marka ay timaado dhammaan qaybaha nolosha waa weyn. Bal aan isku dayaan in ay ka sii yara furan noqon in taariikhaha la dadka aan si buuxda u buuxiya shuruudaha aad. Waxaa laga yaabaa in aad yaabin haddii aad dhici qof aan ku haboonayn hadafyada aad, waxa dhacaya.